Digital Inqola Ikhamera, ukuzingela Ikhamera, Ukuzingela Inqola Ikhamera - Kinghat
IShenzhen Kinghat Technology Co., Ltd.
Ikhamera yomzila wokuzingela oyisisekelo
3G ukuzingela ikhamera
4G ukuzingela ikhamera
Shenzhen Kinghat Technology Co., Ltd. yasungulwa ngo-2009, elise Bao, 'i Shenzhen, kuyinto nomkhiqizi professional wahlanganyela kule ucwaningo, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa, ukudayiswa kanye isevisi ye-Consumer electronics imikhiqizo kanye Smart nabaqaphi.
hlola amaqoqo yethu
yokukhanya ngoba sonke isikhathi
Iyini ikhamera yokuzingela: ikhamera esebenzayo ezinikele ensimini
Ekhuluma ngamakhamera wokuzingela, mhlawumbe abantu abaningi abezwanga ngakho. Ama-novices amaningi edijithali acabanga ukuthi amakhamera ngamakhamera edijithali nama-SLR kuphela. Eduze nasekhaya, ikhamera yokuzingela, njengoba igama liphakamisa, ikhamera ekhethekile eyenzelwe ukuzingela endle. Ngokwemigomo ye-layman, uma uyazi ukuthi d ...
Izinga eliphakeme okuzenzakalelayo elikhulu le-LCD elibonisa izandla udonga lwamahhala olubekwe izinga lokushisa
I-16MP 4G 48 * 940nm LEDS 0.25s icupha i-IP66 Ayikho ikhamera ekhanyayo yombono wokuzingela ebusuku
©Kinghat Outdoor Products.All Rights Reserved. 粤ICP备2020123259号 Okufakiwe Products , Ibalazwe , Hambayo Site
Waterproof Trail Camera, Inqola Ikhamera Infrar , ukuzingela Vision Thermal Ikhamera , 12mp seso Led Wildlife Ikhamera , Animal Ukuzingela Ikhamera , Inqola Ukuzingela Ikhamera ,